ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: June 2012
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပခရီးစဉ်မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိသော အွန်လိုင်းပေါ်မှပုံများ
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:44 PM No comments:
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ ကဗျာဆရာတွေရဲ့ ငါတို့အိပ်မက်ကဗျာတွေ စာအုပ်ထွက်
မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဇွန် ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ MoeMaKa Burmese News & Media
ရန်ကုန်မြို့တွင် အဆိုပါစာအုပ်ထွက်ပြီဟု ဆိုသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တွင် အဆိုပါစာအုပ်၏ ကော်ပီဓာတ်ပုံများကို လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ ကဗျာဆရာများ၊ မျိုးဆက်သစ် နိုးကြားသူများ စုစုပေါင်း ကဗျာဆရာ ၂၅ ဦး၏ ကဗျာများ ဖြစ်သည်။
ကဗျာဓားနဲ့ မခုတ်ရက် … ဟု ရေးထားသည်။
June 29, 2012 at 12:50 pm | Categories: ဓာတ်ပုံသတင်း
မိုးမခမှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ် ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:02 AM No comments:
ကြိုးစားကြ ရင် မကောင်းပေဖူးလားဗျာ...။
ဇွန် ၂၉ ၂၀၁၂
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:57 AM No comments:
Burma/Myanmar အပေါ် ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် အမြင် ..
Myanmar, Burma ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သုံးနှုန်းတာကို သတိပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နာယက အဖွဲ့ဝင် ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ကို RFA အဖွဲ့သား ကိုနေရိန်ကျော် ဆက်သွယ်ထားတာကို နားဆင်နိုင် ပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:48 AM No comments:
ယတြာဆရာ နဲ့ ဗလာချာ
Aung Pan's Photos
"နိုင်ငံတော်၏အမည်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဌာန်း ထားသည့်အတိုင်း ရေးသား၊ ပြောဆို အသုံးပြုရေး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားထားခြင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်"
Burma (ဘားမား)ဆိုတာ အလွဲအမှား
ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ Myanmar လို့ပြင်ထား
အဲဒီခါများ Burma မခေါ်ဘဲ
ပြောင်း ပြောင်း ပြောင်း
ကောင်း ကောင်း ကောင်း
တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြွယ် (ဇွန် ၂၈ ၂၀၁၂)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:40 AM No comments:
ကံကိုလဲ ရိုးမယ်မဖွဲ့ 
နေ့ သစ်ရဲ့ အာရုံဦးမှာ
နီရဲတဲ့နှင်းဆီပွင့် ။ ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:42 AM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:57 AM No comments:
ပါရီသမိုင်းဝင် Louvre ပြတိုက်ကို သွားရောက်မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ နှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
ဒေါက်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြင်သစ် Sorbonne တက္ကသိုလ် မှာ 28.6.2012 ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဗွီဒီယိုဖိုင်
photo Gutty Image
ကိုယ်ပေါ်မှာ ၀တ်ထားသော အသက်ကယ် အင်္ကျီ ကို တစ်ခေါက်ထပ်မံစစ်ဆေးနေမိသည်…. ပင်လယ်ပြင်၏ အအေးဒဏ်မှ ကာ ကွယ်ပေးနိုင်မည့် အီမားရှင်းဝတ်စုံကို လည်း စစ်ဆေးရပြန်သည်…. အသက်ကယ်အင်းကျီထဲ တွင် ပလတ်စတစ် အိတ်နှင့် သေချာ ထုတ်ထားသော လစာသုံးလစာ နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ပြန်စမ်းကြည့်သည်.. ဟုတ်ပြီ.. ဒါဆို အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ…. သဘောင်္အား စွန့်ခွာရန်အချက်ပေးသည်နှင့်.. အသက်ကယ်လှေပေါ်တက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ… လက်ထဲမှ ပုတီးကို သန်ဗုဒေ ဂါထာ တစ်ခေါက်ရွတ်ရင်း ..တစ်လုံးစီချနေမိသည်….. အမေ့ကိုလည်း သတိရသည်… အဖေကို လည်း သတိရသည်….. ချစ်သူကိုလည်း သတိရနေသည်…..ညီအငယ်ကောင်ရော.. ငါမရှိတော့ ရင်……….. တွေးနေရင်းမှ မျက်ရည်တွေက ကျလာပြန်သည်…….. ထိုအချိန် “ ဒုန်း! “ ကနဲ အသံကို ကြားလိုက်ရသဖြင့်.. ထိုင်နေသူအားလုံး လန့်ဖြန့်ကာခေါင်းနပန်းတွေကြီးကုန်ကြသည်..….ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကို ရောက်လာပြီလား…မျက်ရည်များ က အလိုလို ကျလာပြန်သည်…. မှန်ပါသည် …. ကျွန်တော်သည် သဘောင်္တစ်စင်းပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်… တိတိကျကျဆိုရသော် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံ အိုမင်နိုင်ငံအောက် သမုဒရာထဲတွင် သွားနေသော သဘောင်္တစ်စင်းပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်….. ထိုထက်တိကျရလျှင်…အိုမင်နိုင်ငံအောက်ဘက် သမုဒရာထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ အလယ်တွင်ရောက်နေသည့် CHEMBULK VIRGIN GORDA သဘောင်္ပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်……
ညနေစာစားရန်သွားမေးကြည့်တော့ … ချိဖ်ကွတ် (ထမင်းချက်) ကြီး က.ချစ်ဖို့ အတော်ကောင်းပါသည်… ဘဲသားဆန်ပြုတ်တစ်အိုးပြုတ်ပေးထားသည်… မှန်ပေသည်.. လှိုင်းမူးနေချိန်တွင် အကောင်းဆုံးမှာ .. နွားနို့နှင့် ဆန်ပြုတ် နှစ်မျိုးထဲဖြစ်သည်… အစာကြေလွယ်သည်…. ပြန်အန်လျှင်တောင်.. အန်တဲ့လူသိပ်မခံရ.. သက်သာသည်ဟုဆိုရမည်…. ကျွန်တော်လည်း ဗိုက်ဆာဆာနှင့် ဆန်ပြုတ်နှစ်ပန်းကန်လောက်သောက်လိုက်သည်…..ထိုအချိန်တွင်…. တက်မကိုင် (A/B) နှစ်ယောက် ထမင်းစားခန်းထဲဝင်လာသည်… ကိုပန့်လည်းနောက်က ပါလာသည်… မျက်နှာတွေက သိပ်မူမမှန်… ဘီယာသောက်ထားပုံရသည်… ထိုနောက်တီဗီဖွင့် … ဒီဗီဒီ ဖွင့်ကာ ဘာမဆိုင်.. ညာမဆိုင်.. ကာရာအိုကေဆိုပါလေတော့သည်….. ကတဲ့လူကလည်း ကွေးနေအောင်ဘေးနားကနေကသည်…. လှိုင်းက ပေးနေတာမို့ က လိုက်.. သဘောင်္စောင်းလျှင်လဲကျသွားလိုက်…ပြန်ထ ကလိုက်လုပ်ကြသည်….. ကိုပန့်ကတော့ .. ထိုင်ခုန်မှာ ထိုင်ရင်… အားပေးနေသည်… သီချင်းလိုက်ဆိုသည်….
ကဲ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမည်နည်း… အခန်းထဲ အမြန်ပြန်သည်… သိမ်းစရာရှိတာ သိမ်းမှရမည်… ကိုယ်နဲ့ တစ်ပါတည်း သယ်နိုင်တာ ပိုက်ဆံဖြစ်သည်… စားစရာက .. အသက်ကယ်လှေမှာပါပြီးသားမို့ .. သယ်စရာမလို… ပြီးလျှင် ကိုယ့်ဓာတ်ပုံနှင့်နာမည်ပါသော အထောက်အထားတစ်ခု..တော်ကြာ အလောင်းတွေ့မှ .. ဘယ်သူမှန်း ရှာမရဖြစ်နေမည်… တွေးသာတွေးနေသည်.. ဒီလောက်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲ ဘယ်နားက အလောင်းကို ပြန်ရနိုင်ပါမည်နည်း.. ကဲထားလိုက်ပါလေ.. ဟုတ်ပြီ … သဘောင်္သားအသင်းဝင် ကတ်ပြား… ရှိသည်ပဲ… ပိုက်ဆံနှင့် ထိုကတ်ပြားနှစ်ခုကို တွဲရွေ့ ပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ခု ထဲတွင် ရေလုံအောင် အထိ ချည်ပြီး… တိတ်များဖြင့် ကပ်လိုက်သည်… ပိုက်ဆံက သုံးလစာပဲရှိသေးသည်မို့ .. ထုပ်ရတာလွယ်ကူသည်… လက်တစ်စုဆုပ်စာ… အထုပ်ကလေးဖြစ်သွားသည်… ထို့ နောက် .. အင်းကျီအိတ်ကပ်ထဲထည့် ကာ အပ်ချည့်နှင့်ထည့်ချုပ်ထားလိုက်သည်… ပြေးရင်းလွှားရင်း ပြုတ်မကျရင်တော်ပြီ…. ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု ဓာတ်ပုံ…. ကျွန်တော့ရည်းစားပုံ စတာတွေအိတ်ကပ်ထဲထည့်သည်… ဒါပဲဖြစ်သည်… အဲ.. ဆေးလိပ်တစ်ဘူးပါရေလုံအောင်ထုပ်ရွေ့ မီးခြစ်နှင့်အတူထည့်ထားလိုက်သည်….
(အစ်ကို.. ကျွန်တော်နောက်ဘယ်တော့ မှ သဘောင်္မလိုက်တော့ ဘူးဗျာ… ဒီပထမဆုံးတစ်ခေါက်နဲ့တင်အတော်မှတ်နေပြီ….. ဒီမုန်တိုင်းထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ မသေလောက်ပါဘူးနော်..)
(အင်ဂျင်ခန်းက လူအားလုံး……ပြင်ဆင်စရာရှိတာ ပြင်ဆင်ထားလိုက်ကြပါတော့…… ကျွန်တော်တို့ သဘောင်္ မုန်တိုင်းရဲ့ အလယ်ဗဟိုထဲကို ပါသွားပါပြီ….. အချက်ပေးသံကို ပဲစောင့်နေပါ…. အချက်ပေးတာနဲ့ လေ့ကျင့်ထားတဲ့ အတိုင်း…. ကိုယ့်အသက်ကယ်လှေဆီကိုယ်သွားပြီး…. ကိုယ့်တာဝန်အတိုင်းဆက်လုပ်ကြပါ…. အသက်ကယ်အင်ကျီတွေဝတ်ထားလိုက်ကြပါ… အပြင်မှာ ညဘက်ဆိုတော့ အေးပါမယ်…. အီမားရှင်းဝတ်စုံတွေလည်း ယူထားပါ….. ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ့မယ်…အေစိအိုကြီးလည်း ကြိုးစားနေပါတယ်… သူကြီးကတော့ ဗျာ… သူ့ အခန်းထဲပြန်ပြီး ဘုရားသွားရှိခိုးနေလေရဲ့ BRIDGE ပေါ်ကိုတောင်ပြန်တက်မလာတော့ ဘူး.. အတော်ကြောက်နေပြီထင်တယ်…. ကဲ သွားမယ်ဗျာ… ဂွတ်ဒ် လက်ခ်.. အော်ဒါက ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ပတ်စ်ပို့တွေပါ…ပြန်ယူထားလိုက်ကြပါတော့… ကိုယ်နဲ့ တစ်ပါတည်းဆောင်ထားပေါ့.. ဒါမှ တစ်ခုခုကိုယ့်ကို ရှာတွေ့တဲ့ အခါ.. အထောက်အထားပြနိုင်မှာလေ… ကဲကဲ.. သွားဥိးမယ်ဗျာ..)
ကျွန်တော်တို့ မှာ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိပါ…လုပ်ယူလို့ လည်း မရပါ…..အချက်ပေးသံကို. ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေရုံသာရှိပါတော့သည်…. ကိုယ်ပေါ်မှာ ၀တ်ထားသော အသက်ကယ် အင်္ကျီ ကို တစ်ခေါက်ထပ်မံစစ်ဆေးနေမိသည်…. ပင်လယ်ပြင်၏ အအေးဒဏ်မှ ကာ ကွယ်ပေးနိုင်မည့် အီမားရှင်းဝတ်စုံကို လည်း စစ်ဆေးရပြန်သည်…. အသက်ကယ်အင်းကျီထဲ တွင် ပလတ်စတစ် အိတ်နှင့် သေချာ ထုတ်ထားသော လစာသုံးလစာ နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ပြန်စမ်းကြည့်သည်.. ဟုတ်ပြီ.. ဒါဆို အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ…. သဘောင်္အား စွန့်ခွာရန်အချက်ပေးသည်နှင့်.. အသက်ကယ်လှေပေါ်တက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ… လက်ထဲမှ ပုတီးကို သံဗုဒ္ဓေ ဂါထာ တစ်ခေါက်ရွတ်ရင်း ..တစ်လုံးစီချနေမိသည်….. အမေ့ကိုလည်း သတိရသည်… အဖေကို လည်း သတိရသည်….. ချစ်သူကိုလည်း သတိရနေသည်…..ညီအငယ်ကောင်ရော.. ငါမရှိတော့ ရင်……….. တွေးနေရင်းမှ မျက်ရည်တွေက ကျလာပြန်သည်…….ကျွန်တော်သူတို့ နှင့်နောက်တစ်ခါ ဘယ်တော့ မှ တွေ့ ခွင့်မရှိနိုင်တော့ဘူးလား….. .
မုန်တိုင်းကျပြီး နောက်ပိုင်းတွင်း ကျွန်တော်တို့ သဘောင်္ပေါ်တွင် အပြောင်းအလဲ အတော်များများ ဖြစ်လာကြသည်….အားလုံးက တော့ကုလားသူကြီးကို ၀ိုင်းမေတ္တာပို့ ကြပြီး အေစီအိုကြီးကို ကျေးဇူးတင်ကြသည်… လူပေါင်း နှစ်ဆယ့်သုံးယောက်လုံး၏ အသက်ကို ကယ်ခဲ့သူမဟုတ်လား….ကုန်းချုပ်ကလည်း သဘောကျပါသည်..သူ့ အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အတွေ့အကြုံ ကြီးတစ်ခု ရလိုက်သလိုဖြစ်နေသည်…ဖတ်စ်အီး…. ကတော့ .. နောက်က်ို လှိုင်းမူးလိမ့်မယ်မထင်တော့ ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ကို အရွှန်းဖောက်တတ်ပါသည်…...ကျွန်တော့ ကဒက်ကလေးကတော့…. သဘောင်္ဆက်လိုက်မည်ဟုပြောပါသည်… ဒီလောက်ဒုတ်ခကို သူခံနိုင်သွားပြီဆိုလျှင်သူဘာကို မှ မကြောက်တော့ ကြောင်းပြောပါသည်…. ဒီမုန်တိုင်းက သူ့ စိတ်ဓာတ်ကို မာကျောအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပေပြီ…. အင်းကျီချွတ်ကာ သီချင်းဆိုကြသူ အေဘီများ အကြောင်းကတော့…. ပြောမဆုံးပေါင်ပင်ဖြစ်နေသည်…. နောက်ပိုင်း ပါတီလုပ်လို့ သီချင်းဆိုတိုင်း သူတို့ နှစ်ဦးကို အင်းကျီချွတ်ရွေ့ က ခိုင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း အားလုံးက သဘောတူကြသည်… ကုလားသူကြီးကတော့ …. ရုံးသို့ စာပို့လိုက်သည်… အခုလို မုန်တိုင်းနှင့်ကြုံရခြင်းမှာ သူ့ အပြစ်မဟုတ်ကြောင်း…. အေစီအိုက WEATHER REPORT ကို သေချာ မစစ်လို့ ဖြစ်ကြောင်းလှမ်းပို့ လိုက်ပါသည်…. သို့သော်သူ့ အကြောင်း သိသော ရုံးမှ ဆူပါဗိုက်ဆာမှ…. ရှေ့လာမည့်  ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း စာပြန်လာသည်…အဓိပါယ်ကတော့ အလုပ်ဖြုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်…. ကျွန်တော်တို့ တစ်စင်းလုံးပျော်ကြပါသည်….. ၀မ်းနည်းစရာကောင်းသည်က တစ်ခုပဲဖြစ်သည်.. ကျွန်တော်တို့ အနောက်သဘောင်္မှ သဘောင်္သားများ သတင်း လုံးဝ မကြားရခြင်းပင်ဖြစ်သည်… အစအနပင်ရှာမရဟု ဆိုပါသည်….
by: လင်းလွန်းညို (ozzy win)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:14 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပခရီးစဉ်မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိေ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ ကဗျာဆရာတွေရဲ့ ငါတို့အ...
ပါရီသမိုင်းဝင် Louvre ပြတိုက်ကို သွားရောက်မှတ်တမ...